भोजपुरका सुदेश पराजुली बने अनेरास्ववियुको अध्यक्ष, कसलाई के जिम्वेवारी ? — KhabarTweet
भोजपुरका सुदेश पराजुली बने अनेरास्ववियुको अध्यक्ष, कसलाई के जिम्वेवारी ?
प्रकाशित मिति: बिहिबार, चैत्र १२, २०७७ समय: २०:०५:१८
काठमाडौं- भोजपुरका सुदेश पराजुली अनेरास्ववियुको केन्द्रिय अध्यक्षमा चयन भएका छन् । नेकपा एमालेमा समानान्तर कमिटी गठन कार्यले तीव्रता पाएको अवस्थामा माधवकुमार नेपाल समुहवाट पराजुली अध्यक्ष चयन भएका हुन ।
ओलीसँग भिडेरै अगाडि बढ्ने मुडमा निचोडमा रहेको नेपाल–खनाल समूहले मंगलबार अनेरास्ववियुको पनि समानान्तर कमिटी बनाएको हो । समानान्तर कमिटीमा अध्यक्ष, सहअध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, ८ जना उपाध्यक्ष तथा ३७ जना सचिव छन् ।
भेलाले सह–अध्यक्षमा ओसिम आलमलाई चयन गरेको छ । महासचिवमा आरती लामा जिम्मेवारी दिएको छ। भेलाले केन्द्रीय कमिटी पनि निर्माण गरेको छ ।
कसलाई के जिम्मेवारी ?
अध्यक्षः सुदेश पराजुली
सहअध्यक्षः वसिम आलम
महासचिवः आरती लामा
कोषाध्यक्षः दिपेश प्रसाई
उपाध्यक्षः यसु लामा
उपाध्यक्षः हिरेन्द्र शाही
उपाध्यक्षः लोकेश निरौला
उपाध्यक्षः माधव पन्थ
उपाध्यक्षः केशरी रेग्मी
उपाध्यक्षः सुदिप शर्मा
उपाध्यक्षः युवराज कुँवर
उपाध्यक्षः कल्पना थापा
सचिवः मिलन राई
सचिवः एकराज दाहाल
सचिवः प्रकाश श्रेष्ठ
सचिवः दीपक फुयाल
सचिवः रवि राय
सचिवः प्रतिक्षा कार्की
सचिवः भुपेन्द्र शाह
सचिवः अशोक थापा
सचिवः तपेन्द्र शाही
सचिवः ऐन विक्रम कुँवर
सचिवः कल्याण दाहाल
सचिवः नरेश न्यौपाने
सचिवः भुपेन्द्र शाही
सचिवः सञ्जय लामा
सचिवः दुर्गा जोशी
सचिवः गणेशसिंह ऐरी
सचिवः भिष्मराज सुवेदी
सचिवः डम्बर सिंह
सचिवः जङ्ग विक
सचिवः दिपक विष्ट
सचिवः दिनेश लो
सचिवः डा। निश्चल गुप्ता
सचिवः लायक चौधरी
सचिवः निशा चापागाईँ
सचिवः हरिस खड्का
सचिवः देवीनन्द मण्डल
सचिवः राजकिशोर यादव
सचिवः राजन शर्मा पराजुली
सचिवः महेश श्रेष्ठ
सचिवः प्रदीप थापा
सचिवः राजु थामसाङ
सचिवः किशोर टण्डन
सचिवः दिपेश बराल
सचिवः लक्ष्मी केसी
सचिवः राजकुमार विक
सचिवः राजेन्द्र कुँवर
सचिवः भेषनाथ चापागाईँ
केन्द्रीय अनुशासन आयोग अध्यक्षः शंकर गौतम
केन्द्रीय लेखा आयोग अध्यक्षः उत्तर खड्का
केन्द्रीय निर्वाचन आयोग अध्यक्षः रमेश बराल